माओवादीबाट को–को बन्दै छन् मन्त्री? यी नयाँ अनुहारको आयो अगाडी नाम ! – Ramailo Sandesh
माओवादीबाट को–को बन्दै छन् मन्त्री? यी नयाँ अनुहारको आयो अगाडी नाम !
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री बन्न लागेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शपथ लिने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले आजै देउवाको नियुक्ति र शपथको तयारी गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिउँसो पाँच बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन सोमबार आदेश दिएको थियो। यो संगै देउवा पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
योसँगै उनको मन्त्रिमण्डलमा गठबन्धनमा समावेश कुन पार्टीका कति जना र को–को मन्त्री बन्दै छन् भन्नेबारे चर्चा सुरु भएको छ। गठबन्धमा सामेल कांग्रेस भन्दा १० सिट कम अर्थात ४९ जना सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कति र को–को मन्त्री बन्दै छन् भन्नेबारेको चर्चाले पनि स्थान पाएको छ। सरकारमा आफ्ना तर्फबाट कति र क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे छलफल गर्न माओवादीले मंगबालर पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ।
त्यसलगत्तै मन्त्रीहरुकै सहभागिताबारे छिनोफानो गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ जाँदै छन्। माओवादी स्रोतका अनुसार देउवा सरकारमा यसअघि नेकपा सरकारमा लामो समय मन्त्री भइसकेका आफ्ना नेताहरुलाई सकेसम्म नपठाउने गरि छलफल सुरु भएको छ। सकेसम्म महिला, दलित, जनजाती र नयाँ अनुहारहरुलाई नयाँ सरकारमा पठाउने गरि छलफल सुरु भएको हो।
त्यसमा पम्फा भुसाल, अञ्जना विसंखे, शशि श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। यता क्षमताका हिसाबमा जनार्दन शर्माले फेरि पनि मन्त्री पाउने सम्भावना छ। उनी नेकपा सरकारमा सामेल थिएनन् । देव गुरुङ, देवेन्द्र पाैडेलको नाम पनि चर्चामा छ।
स्रोतले भन्यो,‘ संख्याबारे देउवासँग सहमति भएपछि मात्रै नाम टुंगो लाग्ला। तर यसपटक हामीले नयाँ अनुहार, समावेशितामा ध्यान दिने छौँ। यसअघि लामो समय मन्त्री भइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने योजना छ।’
काग्रेसबाट यी नेताहरु मन्त्रि बन्दै
जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बन्दैँ, देउवा सरकारमा अरु को–को बन्दैँछन् मन्त्री ? (नामसहित)